नेपाल आउन लागेका मोदीलाई ग्रेटर नेपालका फडिन्द्रले भने, “नेपालको ६० हजार बर्ग कि. भु-भाग कब्जा गर्ने प्रम नरेन्द्र मोदी राक्षस् हो” (भिडीयो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपाल आउन लागेका मोदीलाई ग्रेटर नेपालका फडिन्द्रले भने, “नेपालको ६० हजार बर्ग कि. भु-भाग कब्जा गर्ने प्रम नरेन्द्र मोदी राक्षस् हो” (भिडीयो)
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायती उपनिवेशमा रहेको नेपाली भुभाग अब नेपालले प्राउनुपर्छ भन्दै माग गर्दै आएको संस्था हो । यो संस्थाले नेपाली भूमी फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा कानुनी लडाई समेत लड्दै आएको छ ।
यो संस्थाले पछिल्लो समय बेलायतको ४ दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेलाई उजुरी पत्र पठाएको छ।
ग्रेटर नेपालले भारतको यो विस्तारवादी व्यवहारमाथि अङ्कुश लगाउनुपर्ने भन्दै कानुनी लडाई लडिरहेको हो । यो संस्थाको अगुवाई फणिन्द्र नेपालले गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री केही दिन भित्रै नेपालको राजकिय भ्रमणमा आउंदैछन् । भारतीय ज्यादती र साम्राज्यवाद विरुद्ध आवाज उठाउंदै आएका नेपालले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाएका छन् ।
विगत दुई दशक देखि नेपालको गुमेको भुभाग ६० हजार वर्गकिलोमिटर जमिन भारतले कब्जा गरेर राखेको छ । जसमा पुर्वमा दार्जिलिगं सिक्किम, सिलगाडीका भुभाग छन् भने पश्चिममा कुमाउ, गडवाल, नैनीताल, देहरादुन सिम्ला लगायतका क्षेत्र नेपाली भुभाग रहेको भन्दै फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेको छ । ग्रेटर नेपालले भारतमा समेत पुगेर आफ्ना माग राखेका छन् । नेपालले सन्धि बेलायतसंग गरेको हो ।
भारतसंग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । १८१६ मार्च ४ मा बेलायतसंग भएको सुगौली सन्धिमा कुनै तेस्रो पक्ष संलग्न छैन । सुगौली सन्धि रद्ध भइसक्दा पनि भारतले सो हाम्रो जमिन भारतले आफ्नो कब्जामा राखेको छ । नेपालले औपचारीक रुपमा पुरानो भुभाग नेपाललाई चाहिन्छ भनिसकेको अवस्थामा भारतले सो क्षेत्र दिनुपर्छ । तर त्यो प्रकृया पुरा नहुंदा अहिले नेपालले मानेको सिमाना मेची र महाकालीमा समेत भारतले १ हजार ३ सय स्क्वायर किलोमिटर जमिन कब्जा गरेको छ । नेपाली भूमी फिर्ता पाउने प्रसस्तै आधारहुंदा हुंदै पनि किन भारतले सो जमिन फिर्ता गरेको छैन ? त्यो जमिन नेपालले फिर्ता पाउन के के कानुनी आधार छन् ? यसै विषयमा रतन चन्दले ग्रेटर नेपालका संयोजक फणिन्द्र नेपालसंग गरेको कुराकानी भिडियो :
पदबाट राजिनामा दिएका महरा र आरोप लगाउने महिलाको बारे बीबीसीले निकाल्यो यस्तो रिपोर्ट
नेपालमा भर्खरैका युवायुवती नै बढि कोरोनाबाट पीडित, आज नै २० देखि २९ वर्षसम्मका २ हजार बढि संक्रमित